We.com.mm - ချစ်သူနှစ်ဦးကြား Message ပို့ခြင်းကြောင့် ရန်မဖြစ်ရအောင် လိုက်နာရမယ့်အချက် (၆)ချက်။
ချစ်သူရည်းစားတွေရန်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောပြချင်တာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်…။
ဒါကတော့ ချစ်သူရည်းစားအတွဲတွေတိုင်းလိုက်နာသင့်တဲ့ အချက်ပါပဲ…။
ချစ်သူရည်းစားတွေဆိုတာ တွဲတာကြာကြာ၊ မကြာကြာ လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းကမ်းချက်လေးတွေလည်းရှိနေပါတယ်…။
Message ပို့တာနဲ့ပတ်သတ်လို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အထင်လွဲ၊ စိတ်ဆိုးစရာတွေဖြစ်ပြီး မပြေလည်မှုလေးတွေလည်း ရှိလာနိုင်ပါတယ်…။ ဒီအချက်က ချစ်သူရည်စားကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့်လည်း ချစ်သူတွေကြားမှာ ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့…။ ဒီတော့ သင်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ စိတ်ပျက်စရာကိစ္စလေးတွေမကြုံရစေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်…။
၁. စကားလုံးတစ်လုံးလောက်ပဲပို့ပြီး Reply ပြန်တာမျိုး…။
တစ်ဖက်က သတိတရနဲ့ Message ပို့တဲ့အခါတွေမှာ စကားလုံးတစ်လုံးထဲနဲ့ ပြန်ဖြေပြီး Reply ပြန်တာမျိုးက အဆင်မပြေစေပါဘူး…။ အနည်းဆုံးတော့ အကျိုးအကြောင်းလေးပြောပြပြီး ပြန်ဖြေတာမျိုးက ပိုပြီးအဆင်ပြေစေပါတယ်…။ လူတိုင်းကတော့အချိန်တိုင်းအားလပ်နေတယ်ရယ်လို့တော့ မရှိပါဘူး…။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ချစ်သူက ပို့လိုက်တဲ့စာတွေကို စိတ်မပါတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ တိုတိုလေး Reply ပြန်တာမျိုးကလည်း တစ်ဖက်လူကိုစိတ်ပျက်သွားစေနိုင်ပါတယ်…။
၂. စာပို့ထားတာတွေကို မဖတ်တာ…။
ဒါကတော့ တော်တော်လေးကို ပြဿနာတက်နိုင်တဲ့အချက်ပါပဲ…။ ရန်ဖြစ်ထားလို့ စိတ်ဆိုးပြီး စာတွေကို မဖတ်တာကနားလည်ပေးလို့ရပေမယ့် ရန်လည်းမဖြစ်ထားကြပဲ တစ်ဖက်ကပို့တဲ့စာတွေကို လျစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင်တော့ ရန်ဖြစ်စေအောင် ဦးတည်နေသလိုပါပဲနော်…။ စာပိုနေမယ်ဆိုတာကိုသိရဲ့သားနဲ့ အဖက်မလုပ်တာကတော့ တော်တော်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပြတ်တောက်သွားတဲ့ထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်…။
၃. စကားတွေကို ခဏခဏ ထေ့ငေါ့ပြီးပြောတာ…။
ဒီအချက်ကတော့ ဘယ်သူမှ မခံနိုင်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ…။ တစ်ဖက်ကကောင်းကောင်းပြောနေတာကို သင့်ဘက်ကနေ မကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်သွားအောင်လုပ်တာကလည်း ပြဿနာဖြစ်ဖို့ဦးတည်သွားစေတဲ့အချက်ပါပဲ…။ ဒါကြောင့်တစ်ဖက်လူက ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စကားတွေပြောနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ထေ့ငေါ့ပြီးမပြောမိပါစေနဲ့…။
၄. စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ စာတွေပို့တာ…။
ချစ်သူရည်းစားတွေကြားမှာ ဒီအချက်ကလည်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်…။ နှစ်ယောက်သားရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ စာပို့ပြီး စကားတွေမပြောသင့်ပါဘူး…။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စကားတွေမှားတတ်ပြီး ပိုဆိုးစေတဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားစေနိုင်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် ရန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ချက်ချင်းစာတွေပို့ပြီးပြောတာထက်…၊ သင့်စိတ်တွေကိုအရင်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပြီးမှ စာတွေပို့ပြီး ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်…။
၅. ခဏခဏ စာတွေပို့တာ…။
ဒါကလည်း စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ…။ တစ်နေ့မှာ အကြိမ်အရေအတွက်တော်တော်များများကို စာတွေပဲပို့နေမယ်ဆိုရင် ကြာလာတဲ့အခါမှာ စိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီး သင့်ကို စိတ်ဝင်စားမှုလည်းလျော့နည်းလာစေပါတယ်…။ အဲဒီအစား တစ်နေ့မှာ ၂ ခါ ၃ ခါလောက်ပဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့စာလေးတွေ ပို့ပေးသင့်ပါတယ်…။
၆. နှစ်ယောက်တူတူရှိနေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို စာတွေပို့တာ…။
သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း သင့်ချစ်သူနဲ့တွေ့နေတဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်ခြားတစ်ယောက်ကို စာပို့နေတာမျိုးတွေမလုပ်မိပါစေနဲ့…။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ချစ်သူနဲ့တွေ့နေရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ အချိန်တွေအားလုံးကို သူပဲ ပိုင်ချင်တာပါ…။ ဒီလိုအခါမျိုးမှာ သင့်အနေနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင် ပြဿနာတွေ မဖြစ်လာနိုင်တော့ပါဘူး…။
ချစ်သူတိုင်း အဆင်ပြေစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ ရိုးရှင်းလွန်းသော လျှို့ဝှက်ချက် (၂၅)ချက်
သင့်ဘဝအတွက် ဒီလူကိုလက်လွှတ်လိုက်သင့်ပြီလို့ သတိပေးနေတဲ့ အရာတွေက…
ဒီ(၄)ချက်က သင် သင့်ချစ်သူကို စိတ်မပါတော့ဘူးလို့ ဖော်ပြနေတဲ့အချက်တွေပါပဲ…